MAHAFINY Sukhoi Su-26 FSX
Aerobatic fiaramanidina kely Sovietika ny fampisehoana! Ny sary tsara ny modely mandeha an-dafin'ny tsotra "freeware" isaky miaraka amin'ny fifantenana sy tsara karama mendrika.
Dia ahitana ny roa textures "Ferrari" sy ny "McLaren" metaly eritreritra sy ny feo manokana ho modely ity. A detailled cockpit virtoaly (VC) dia faly ihany koa ny mahatonga anao.
Ny Sukhoi Su-26 dia tokana-seater aerobatics fiaramanidina avy any amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha, Powered by tokana radiala reciprocating maotera. Ny Su-26 tapaky ny volana manana elatra niakatra mahitsy sy raikitra fipetrahana fitaovana, ny tena fitaovana nitaingina amin'ny Arc titane mafy orina.
Ny Sukhoi Su-26 nanao ny sidina voalohany tamin'ny Jona 1984, efatra tany am-boalohany, izay misy hevi-dehibe roa-bladed. Ny famokarana mifamadika ny Su-26M, amin'ny voadio rambony faritra sy ny 3-bladed Hoffman hevi-dehibe. Koa fanatsarana natao, ary nandresy ny modely na ny lehilahy sy ny vehivavy ny ekipa tao amin'ny 1986 loka World Aerobatics Championships. Ny farany Su-26M3 ny vaovao 9-HP M430F maotera Nanjakazaka tamin'ny namany ny 2003 sy 2005 Aerobatic World Championships ary koa ny 2004 European Championships. Ary nisy naondrana tany Arzantina ao amin'ny 1990s.